Duqa Degmada Qardho iyo Taliyaha Saldhiga Qardho oo sameeyay Hawl galo la xiriira Deegaanka.
Gelinkii hore ee Saaka ayay ka safreen Magaalada Qardho duqa Degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan iyo Taliyaha Saldhiga Degmada Qardho, Ujeedada socdaalkooda ayaa salka ku haysay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen Xaalada Deegaanka oo maamulku degmadu ay meelaha qaar kusoo rogeen in la xirmeeyo mudo 30 casho.
Intii ay maamulku wadeen hawlgalkaan oo isugu jiray in dadka dooxooyinka la xiray degan ay ka guuraan, sidoo kalena la joojiyo kaamamka iyo deegaamaynta sharci darada ah waxay ku guuleysteen in ay qabtaan gawaari markaas rar dhigaysay dooxooyinkii la xiray iyo dad sameeyay kaamam sharci daro ah.
Meelaha ay tageen waftigu waxaa ka mid ah Saljinbo, Guudcad, Ceelay, Qalwo, Curaardoog, Liibaaxo, Adinsoone iyo meelo kale oo tira badan. Dhamaan dhulkaan ay tageen ayay u kuurgaleen Xaalada Dadka reer guuraga iyo Baahiyaha ay qabaan.